အဖေ့ကို ပြုံးစေသောသား - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – Full Moon (တိတ်တခိုးမှ ကူးယူသည်)
“မေမေ သားအတွင်းခံဘောင်းဘီ နှစ်ထည် သုံးထည်လောက် ဝယ်ချင်လို့”
“ဝတ်ဖို့လေ မေမေရဲ့ သားသူငယ်ချင်းတွေ အတွင်းခံ ဝတ်ကြတယ်။ သားမှာ တစ်ထည်မှ မရှိဘူး။”
“အမလေး သားရယ်… သားဟာက ကြီးတာလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့”
ဟုတ်တော့ ဟုတ်လေသည်။ မင်းထက် လီးက ပုံမှန်ဆိုရင် သေးသေးလေး။ ကလေးလီးလို့တောင် ထင်မှတ်စရာ။ ဒါပေမယ့် တောင်လာတဲ့အခါ သူ့အလိုလို ထွားသွားတဲ့ လီးကြောင့် မင်းထက်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အစခံနေရတတ်တာမို့ အခက်ကြုံရသည်။ မင်းထက်ရဲ့ လီးက တောင်လာတဲ့အခါ အရှည်က ၅ လက်မခွဲလောက်ရှိပြီး လုံးပတ်မှာ တစ်ကျပ်လုံးလောက် ရှိမည်။ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ရီဝေဦးရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်မရှည်တော့သည့် အမူအရာဖြင့်
“အမေကလည်းဗျား သားဟာက တောင်လာရင် ကြီးတယ်ဗျာ့”
“အေးပါ သားရယ် ဝယ်ပါ။ သားကို မေမေ ပိုက်ဆံပေးလိုက်မယ်။ ကျောင်းတက်တော့မှ ဝယ်လိုက်ပေါ့။”
ငါ့သားလီးကြီး တောင်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ဒီအရွယ်လေးနဲ့ လီးကြီးနေပြီလား မြင်ချင်စမ်းပါဘိလို့ သမန်ကာရှန်ကာ တွေးနေမိသည်။ သားက အခုမှ ၁၄ နှစ်သာ ရှိသေးသောကြေင့် ဖြစ်သည်။ ခါတိုင်းတောင် လီးတွဲလောင်းနဲ့ ရေချိုးတတ်လို့ ခဏခဏမြင်ဖူးပြီး တခါတလေ ရေချိုးတာကြာရင် မိခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင် စိတ်မရှည်စွာနဲ့ ပြီးအောင် ရေချိုးပေးလိုက်တတ်သည်။ ခုမှ အတွင်းခံဘာင်းဘီ ကောက်တောင်းနေလို့ တွေးမိခြင်းသာ။
မင်းထက်က တစ်ဦးတည်းသော သား ဖြစ်ပြီး သူ့ကို မွေးပြီးသည့်နောက်ပိုင်း မိဘတွေက နောက်ထပ် သားသမီး မထွန်းကားပေ။ တားဆေးသုံးတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်။ ဘာလို့ဆို ဖခင်ဦးထွန်းဝေက ကလေးအရမ်းလိုချင်သူ၊ မိခင်ဖြစ်သူကလည်း ခင်ပွန်းသည်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးပြီး ကလေးတပြုံကြီး မွေးပေးလိုက်ချင်သူ ဖြစ်သည်။ ဆေးစစ်ကြည့်တော့ ဘယ်သူ့မှာမှ ပြစ်ချက်မရှိပါ။ အချို့သော အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ဒီလိုမျိုး အလိုလို သားဆက်ခြားတာမျိုးရှိကြောင်း ဆရာဝန် ရှင်းပြလို့ သိကြသည်။
ဦးထွန်းဝေလည်း နောက်ထပ်တစ်ယောက်လေးများ ရမလားဆိုပြီး ကုန်သည်အလုပ်လုပ်ရင်း မအားတဲ့ကြားကတောင် မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပျက်အောင် ကြိုးစားလာခဲ့တာ သားက ၁၄ နှစ်နဲ့ ကိုးတန်းတောင်ရောက်တဲ့ အထိပဲ။ ဒါတောင် မိန်းမဖြစ်သူဗိုက်က ဗိုနေမြဲကျားနေမြဲသာ။
“ဟေ့ယောင် မင်းထက် မင်းတွေ့လား အရှေ့က ဆော်တစ်ပွေရဲ့ဖင်က ထမီကို ညပ်နေတာ”
“ဟာ… မင်းတို့ကလည်း ဘာလာပြနေတာလဲ။”
“မင်းကလည်း ဆော်ဖင်ကြည့်တာ ဘာဆန်းလို့လဲ။ အဲဖင်က လူသားအရင်းအမြစ်ပဲကွ”
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတတ်တဲ့ ဖိုးဇော်ကြောင့် မင်းထက် ဆွံ့အနေသည်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးကို ၉ တန်းရောက်မှ တွေ့ရတာမို့ သူ့အတွက်က အသစ်အဆန်းပင်။ ဘာလို့ဆိုရင် သူ့ရွာက ၈ တန်းအထိပဲရှိလို့ ၁၀ တန်းအထိရှိတဲ့ ရွာသစ်ကုန်းဆိုတဲ့ ရွာသို့ ကျောင်းပြောင်းရသည်။ တစ်နာရီလောက် လမ်းလျှေက်ရတဲ့ ခရီးမို့ စက်ဘီးစီးပြီး သွားရသည်။ ရွာသာဆိုပေမယ့် ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာက မြို့ဆန်သည်။ လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဆေးဆန်းခန်း၊ ဆေးရုံတွေ ရှိသည်။ မိုးတွင်းမှာဆိုရင် ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် သူ့ကိုအိမ်ငှါးပေးရသည်။
“ဟေ့ယောင် မင်းက မကြည့်ဘူး မကြည့်ဘူးနဲ့ ခိုးကြည်ပြီး လီးမတောင်နဲ့နော်။ အတွင်းခံလည်း ဝတ်ထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး။”
နိုင်ထူးက ပြောလို့မဆုံးသေး မင်းထက်လီးက တောင်လာတယ်။
“ဟဟ… မင်းထက်တော့ ကောင်မလေးဖင်ကြည့်ပြီး လီးတောင်”
ကျောင်းဆင်းတော့ မင်းထက် အတွင်းခံ ဝယ်ဖြစ်အောင် ဝယ်သည်။ ဘစ်က ပါကင်နဲ့ တစ်ထုပ် သုံးထည် ပါသည်။ ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စက်ဘီးကလေးကို လေဘာအကုန်တင်ပြီး အိမ်ကို ပြန်ခဲ့တော့သည်။
“သား ပြန်လာပြီးလား။ လွယ်အိပ်ချ ခဏနားပြီး ရေချိူး”
အိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့ သားကို ခြံထဲက မိခင်ဖြစ်သူက အမှိုက်လှဲရင်း ပြောသည်။ ဒီနေ့ကျောင်းမှာ ကာယအချိန် မြက်နုတ်ရတာမို့ လူက ပင်ပန်းသလိုလို ရှိသည်။ လွယ်အိပ်ထဲက ဝယ်လာတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထုပ်ကို ထုတ်ယူရင်း ကျောခင်းလို့ အိပ်ပျော်သွားသည်။
“သားရေ.. သား… ရေချိုးပြီး…”
သား အိပ်ပျော်နေသည်ကို မြင်တော့ တိတ်နေလိုက်သည်။ ရုတ်တရက် သားလိင်တန်က တောင်မတ်လာတော့ ဒေါ်ရီဝေဦး အံသြမိသည်။ သားပြောတာ ဟုတ်လေသည်။ တောင်လာရင် သူ့လီးက ကြီးပုံရသည်။ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ပုဆိုးကို ဆင်ပြောင်ကြီးအားနဲ့ ထိုးထွက်လာသလိုမျိုး။ သားလီးက သူ့အဖေထက်တောင် ကြီးဦးမလား မသိဘူး။ ဒါကြောင့် ငါ့သား ဘစ်ဝတ်ချင်မှာပေါ့။ ဆယ်မိနစ်လောက် ဒေါ်ရီဝေဦး စောင့်လိုက်ပြီး မင်းထက်ကို နိုးလိုက်သည်။
“သား… ထတော့ ကြာကြာမအိပ်နဲ့ လန်းသွားအောင် ရေချိုးလိုက်”
တောင်နေတဲ့ လီးလည်း အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ရီဝေဦး ခေါ်သံကြောင့် ပြန်ကျသွားပြီး ရေချိုးဖို့ ကုန်းထလိုက်သည်။ ပြီးမှ ရေချိုးခန်းသို့ ခြေလှမ်းလိုက်ပြီး ရာသီဥတုရဲ့ အအေးဒဏ်ကြောင့် ခပ်သွက်သွက် ရေချိုးသည်။ ရေချိုးခန်းက အလုံမို့ ကိုယ်လုံးတီးသာ ချိုးလေ့ရှိသည်။ မင်းထက်သာမက သူ့အဖေရော၊ သူ့အမေရော ဖြစ်သည်။ ခပ်သွက်သွက် ရေချိုးနေရင်း ဘွားကနဲ တံခါးက ဖွင့်လာသည်။
“သား မြန်မြန်ချိုး ဒီနေ့ ရာသီဥတုက အေးတယ်”
ပြောလည်းပြော သားရဲ့ လိင်တန်ကို ဒေါ်ရီဝေဦးတစ်ယောက် မသိမသာ ခိုးကြည့်လိုက်သည်။ သားလိင်တန်က လိပ်မင်းကြီး အနားယူချင်လို့ ခေါင်းတော်ကို ကိုယ်တွင်းဖွက်ထားသည့် ပုံစံမျိုး။ ဘာရယ်မှန်းမသိ ခုတလော သားရဲ့လီးကို စိတ်ဝင်စားနေမိသည်မှာ အဆန်းပင်။
“မြန်မြန်ရေချိုးတော့ ပြီးရင် မေမေ ချိုးမယ်”
“ဟုတ်… ဟုတ်….” (တခါမှ သူ့အမေကို မရှက်ဖူးတဲ့ သားက ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာနဲ့)
“သား ရှက်နေတာလား။ ရှက်ရင် နောက်တခါ တံခါးဂျက် ထိုးထားလေ။ သူ့လီးက ကြီးလည်း မကြီးပဲနဲ့ လာရှက်နေတယ်။ သားဟာကို မေမေ မြင်ဖူးပြီးသား ဘာမှရှက်မနေနဲ့။ ကဲ… မြန်မြန်”
မင်းထက် မိမိလီးကို မိမိ ပြန်ငုံ့ကြည့်တော့မှ သူ့အမေ ပြောချင်လည်း ပြောချင်စရာပင်။ ကိုယ့်ဟာကိုတောင် မနည်းပြန်ရှာရသည်။ ရေချိုးပြီးလို့ သူ့အမေလည်း ရေချိုးလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သူ့အဖေ ပြန်လာတာကို စာကျက်ရင်း စောင့်နေသည်။ အဖေပြန်လာတော့မှ ထမင်းလက်ဆုံနွဲကြသည်။
နောက်နေ့ ကျောင်းမှာ မြန်မာစာဆရာ နေမကောင်းလို့ ကာယဆရာ ဝင်ယူသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ကာယအချိန်ဆို မြက်နုတ်ရရင် နုတ်ရ၊ မြက်မနုတ်ရဘူးဆိုရင် ကြိုက်တာ ဆော့လို့ရသည်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ ကာယဆရာက ဟောခန်းထဲမှာ ဘော်လီဘော လေ့ကျင့်ပေးနေကျ ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ခြင်းခတ်သူ ခတ်၊ ဘောပုတ်သူ ပုတ်ပေါ့။ မင်းထက်ကတော့ ပျင်းလို့ ထိုင်ပြီး ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးနေသည်။ ထိုစဉ်
“ဟျောင့်… မင်းထက် ဟိုမှာ လူတဖွဲ့ အုံနေတာ တွေ့လား။”
“အဲဒါက မျိုးလင်း ဆိုတဲ့ကောင်က mp4 ဝယ်လာလို့ အောကား ထိုင်ကြည့်နေကြတာကွ။ သွားရအောင် လာ။”
ဖိုးဇော်ခေါ်လို့ မင်းထက် မလိုက်ချင်တဲ့ ဟန်ပန်နဲ့ လိုက်လာခဲ့သည်။
“ဟျောင့်တွေ ငါ့လည်း စောင့်ဦးကွ။”
“မင်းကလည်း ခရီးအဝေးကြီးမှ မဟုတ်တာ အေးဆေးလာလို့ ရပါတယ်။”
mp4 ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကပ်ပလီကြီးက အဖြူမကို ဆော်နေသည်။
“ကြည့်မကောင်းဘူးက အမဲနဲ့အဖြူနဲ့ သူဟာကြီးကလည်း တစ်ပေတောင် ကျော်ဦးမယ်။ ကျော်လိုက် မျိုးလင်း”
ဘေးနားက မျိုးလင်း သူငယ်ချင်းက ပြောတော့။
“အေးပါကွာ ဒီမှာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှာ နောက်တစ်ကား”
ဟုတ်သည်။ သုံးနှစ်သားက ပေါင်ကားပေးထားတဲ့ မိခင်ကို အားရပါရ လိုးနေတာ။
“ဒီကလေးကို တော်တော်ကြီး သင်ပေးထားတာပဲကွ။ သူ့ကလေးတောင် ဟုတ်ရဲ့လား။”
“ဟုတ်ရင် ဟုတ်မှာပေါ့ကွ နိုင်ငံခြားက ကြက်မိသားစုတွေ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကျော်လိုက်ကွား ကလေးလီးနဲ့ သူ့ဟာနဲ့ မလိုက်ဘူး။ ချစ်သူတွေ လိုးတဲ့ကားဖွင့်။”
မျိုးလင်း သူငယ်ချင်းက တစ်ခါကြည့်ပြီးသူမို့ ဆရာတတ်နေခြင်းပင်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ပြီးသွားလေသည်။ ပေါင်ကြားက လီးက အခုထိ ပြန်မကျသေး။ အတွင်းခံဘောင်းဘီက ခံနေလို့သာ တော်သေးသည်။
မင်းထက် ဒီနေ့ အိမ်ပြန်စောသည်။ ကျောင်းမှာ အစည်းအဝေးရှိလို့ စောစော ပြန်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ရောက်တော့ နေ့လည်က အပြာကားတွေ ခေါင်းထဲက မထွက်သေးတော့ မေမေရေလို့ ထုံးစံအတိုင်း ခေါ်ဖို့ သတိမေ့သွားသည်။ အိမ်ထဲရောက်ပြီး ဝုန်းကနဲ အသံကြားတော့မှ
“မေမေ… မေမေ ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“သားရေ… မေမေ ထလို့ မရတော့ဘူး။ မေ့မေ့ကို လာထူပါဦး။”
ဒေါ်ရီဝေဦး ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသည်။ မင်းထက် ရေချိုးခန်း တံခါးနားရောက်တော့ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လို့မရ အထဲက ဂျက်ထိုးထားသည်။ ဒေါ်ရီဝေဦး လမ်းမလျှောက်နိုင် တစ်လျှောက်နိုင်နဲ့ တံခါးဂျက်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ မင်းထက် လဲနေတဲ့ သူ့အမေ့ကို စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ဆွဲထူရင်း သူ့လက်က သူ့အမေ့နို့ကို ထိသွားသည်။
“မေမေ့ ဖင် နာလိုက်တာ သားရယ်”
မင်းထက် သူ့အမေ ဖင်ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။
“ဟဲ့ သား… သားအတွင်းခံ ဝတ်မထားဘူးလား။”
“ဝတ်ထားတာတောင် ဘာလို့ ငေါထွက်နေတာလဲ။ အာ… နင် နင် မေမေ့ကို ကြည့်ပြီး။”
“ဟုတ်ပါဘူး မေမေရယ် ကျောင်း ကျောင်းမှာ ကတည်းက”
“ကဲ… မြန်မြန် မေမေ့ကို ထိုင်ခုံဆီ တွဲသွားပေး။ ပြီးရင် မေ့မေ့အခန်းထဲက ထမီသွားယူပေး။”
မင်းထက် သူ့အမေ့ အခန်းထဲ ရောက်တော့ ထမီကိုယူပြီး ငေါထွက်နေတဲ့ သူ့ဟာနဲ့ ခဏလောက် ပွတ်နေမိသည်။
“ဟဲ့ သား… ကြာလှချည်လား။”
“လာ… လာပြီ အမေ။”
“ဘရာနဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်လောက်ပါ ယူလာခဲ့။”
မင်းထက် သူ့အမေ အဝတ်လဲနေတာကို ကြည့်ပြီး လီးရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ဘစ်ထဲမှာ ထပ်မှန်ငေါထွက်နေသည်။
“သား… ရေချိုးတော့၊ ပြီးမှ ဆေးခန်းသွားကြမယ်။”
ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ တောင်နေတဲ့လီးကို ဘယ်လို ပြန်လျော့အောင် လုပ်ရမလဲ တွေးနေတုန်း အောကားထဲက ဂွေးထုတာကို သတိရပြီး ထုပစ်လိုက်သည်။ ထိုနေ့က ပထမဦးဆုံး မင်းထက် ဂွေးစတင် ထုဖူးသော နေ့ဖြစ်သည်။ သူ့အမေရဲ့ ကိုယ်လုံးတည်းပုံကို မြင်ယောင်ပြီး တဖတ်ဖတ်နဲ့ ထုပစ်လိုက်သည်။
“သား…. တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဘာလုပ်နေတာလဲ”
“သား ချေးတွန်းနေတာပါ မေမေ”
မင်းထက် ဂွေးထုကြမ်းပုံက သူ့အမေ အပြင်ကတောင် ကြားရသည်။
“ဪ… အေး မြန်မြန်ချိုးနော်”
စိတ်ထဲမှာ အမေ့ကိုမှန်းရင်း ပြီးခါနီးမှာ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ မေမေ့လို့ အသံထွက်အောင် အော်မိသည်။
“သား… သား ဘာဖြစ်လို့လဲ”
သူ့‌အမေအသံ ကြားတော့မှ သတိပြန်ရပြီး…
“ဘာမှမဖြစ်ဘူး မေမေ သား ရေချိုးပြီးပြီး။”
သုတ်ရေတွေ ပန်းထွက်ပြီးမှ ရေနှစ်ခွက် သုံးခွက်လောက် လောင်းပြီး ပြန်ထွက်လာသည်။ ရေချိုးခန်းထဲက သူ့အမေ ချွတ်ပြီး ကြိုးတန်းလေးပေါ် တင်ထားတဲ့ ဘရာလေးမှာတော့ သားဖြစ်သူရဲ့ လီးရည်တွေနဲ့ စွန်းပေလျှက်…။
ဦးထွန်းဝေ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ သူ့မိန်းမနဲ့ သူ့သားကို ခေါ်ကြည့်သော်လည်း ထူးသံမကြားသဖြင့် ကိုယ့်ဟာကို ရေမိုးချိုးပြီး သားနဲ့မိန်းမကို စောင့်နေလိုက်သည်။
ဆေးခန်းပြပြီး ပြန်လာတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုယ် တစ်ယောက် တွဲလျက်။ မင်းထက်က သူ့အမေ့ရဲ့ ဘယ်လက်ကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပြီး သူ့အမေ့ခါးကို နောက်ကျောကနေ ညာလက်ဖြင့် အနည်းငယ်ပိုက်၍ သူ့အမေ လမ်းလျှောက်ရ အဆင်ပြေအောင် ထိန်းပေးထားသည်။ အသားချင်းထိပြီး ပွတ်တိုက်နေရသလိုမျိုးမို့ နှစ်ဦးလုံးက ကြက်သီး တစ်ချက် တစ်ချက် ထနေသည်။ ခြံတံခါးဝ ရောက်တော့
အိမ်ရှေ့ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်စောင့်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်က ရုတ်တရက် စကားစလိုက်သဖြင့် သားအမိနှစ်ဦးလုံး အနည်းငယ်လန့်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကိုရေ… မပြောချင်ဘူး ဆေးခန်းက ပြန်လာတာ”
“ဟုတ်တယ် ဖေဖေရေ မေမေက ရေချိုးခန်းထဲမှာ ခလုတ်တိုက်ပြီး ခြေခေါက်သွားလို့”
“မလိုဘူးတဲ့ ကိုရေ။ ဆရာမက ပြောတယ် ဘာမှ မစိုးရိမ်ရပါဘူးတဲ့။ ခြေချင်းဝတ် လေဝင်သွားတာ။ လိမ်းဆေး လိမ်းပေးရင် ပျောက်တယ်တဲ့။ လိမ်းဆေးလည်း ဝယ်လာတယ်။ ထမင်းစားပြီးရင် ဆေးသောက်ရမှာ”
“ဪ… ဒါဆို ခဏနားကြဦး ကိုထမင်း ခူးလိုက်မယ်”
ဆိုကာ ဦးထွန်းဝေ ထမင်းပွဲကို သူ့ဟာသူ ပြင်ပေးလိုက်သည်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ
“ရော့.. မေမေ စား”
“သား… ခါတိုင်း ဖေဖေ့ကို အရင်ဦးချပါတယ်။ အခု ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”
“အမ်.. မေမေမှ နေမကောင်းတာ ဦးစားပေးရမှာပေါ့ ဖေဖေရဲ့။ ဒါကြောင့် မေမေ့ကို အရင်ထည့်ပေးတာ”
“ကိုကလည်း တော့်သားက အခုမှ ဝေ့ကို အရင်ဦးချဖူးတာပါ။ မနာလို မဖြစ်နဲ့”
“ဟဟ အေးပါ ဝေရယ်။ ငါ့မိန်းမ နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ ဦးစားပေးရမှာပေါ့။ သား မနက်ဖြန် ကျောင်းမသွားနဲ့ အိမ်မှာနေပြီး မေမေ့ကို ကူလုပ်ပေး ကြားလား”
“ဟုတ်… ဟုတ် အဖေ။”
ဒုက္ခပဲ မေမေနဲ့ မနက်ဖြန်ကျရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ တွေးပြီး မင်းထက်တစ်ယောက် ရင်တုန်နေမိသည်။ ညစာစားပြီးတော့ ခဏအနားယူ အချိုတည်းရင်း စကားပြောကြသည်။
“သား… သားကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်ဖို့ ဝါသနာပါလဲ”
လို့ ဦးထွန်းဝေက မေးတော့
“သား ဖေဖေ့လို စီးပွားရေး လုပ်ချင်တယ်။”
“ဒါဆိုရင်တော့ သား ၁၀ တန်း အောင်ရင် စီးပွားရေးမေဂျာ ယူလိုက်”
“သား ကျောင်းမှာ လိုတာရှိရင် သားမေမေ့ကို ပြောနော်”
“သားက ပြောပါတယ် ကိုကြီးရယ်။ ဟိုတနေ့က အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝယ်ချင်လို့ဆိုပြီး ဝေထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။”
“မေမေကလည်း ဖေဖေ့ကို ပြောရလား”
ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ ပြုံး၍သာ ကြည့်နေသည်။ မင်းထက်က သားလိမ္မာ တစ်ဦးပါ။ မိဘတွေက သူ့ကို ပိုက်ဆံပေးလေ့ မရှိဘူး။ ပေးလည်း မယူဘူး။ လိုမှ ယူတတ်သည်။ မိခင်ဖြစ်သူက သားကို လိုလေသေးမရှိအောင်လည်း ပြင်ဆင်ပေးထားတာကိုး။
အတွင်းခံ ကိစ္စနဲ့ ရှက်ရတယ်ဆိုတာက သူတို့ မိသားစုက အတွင်းခံ မဝတ်ဘူး သူ့အဖေရော၊ သူ့အမေရောပဲ။ သူတို့ အဖိုးအဖွားတွေကလည်း အတွင်းခံမဝတ်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ သူ့အမေကတော့ စကပ်တစ်ထပ်နဲ့၊ ထမိန်တစ်ထပ်နဲ့ နှစ်ထပ် ဝတ်လေ့ရှိသည်။ တောနယ်လည်းဖြစ် မိသားစုကိုက အဲလိုပဲနေလာခဲ့တာမို့ ဖြစ်သည်။ မင်းထက် သူ ၉ တန်းရောက်လို့ အမြင်တွေ ကျယ်သွားလေသလားမသိ အတွင်းခံကို သူ့ဖာသာ စဝတ်သည်။
မနက် မိုးလင်းတော့ ဦးထွန်းဝေ မင်းထက်ကို နိုးပြီး အလုပ်သွားလိုက်သည်။ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ဦးထွန်းဝေ ကိုယ်တိုင် သူ့ဟာသူ ချက်ထားလိုက်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် အဆင်သင့် ခူးပြီးခပ်စားရုံ ဖြစ်သည်။
မင်းထက်နိုးတော့ အိုးခွက်တွေ လိုက်ဖွင့်ကြည့်သည်။ ဘာမှမရှိရင် သူချက်ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့အဖေ ချက်ထားပြီးသားဆိုတာ မြင်ရတော့ မျက်နာသစ်သွားတိုက်ပြီး သူ့အမေ့အခန်းကို လှည့်လာလိုက်သည်။
ဇာခြည်ထောင်ပါးလေးထဲမှာ ဒေါ်ရီဝေဦး လှပစွာနဲ့ အိပ်နေသည်။ မင်းထက် အနားသို့လာပြီး သူ့အမေ့ရဲ့ ဘေးစောင်းလေး အနေအထားနဲ့ အိပ်နေတဲ့ အလှကို သူထိုင်ငေးပြီး တစ်ကိုယ်လုံး သိမ်းကြုံးပြီး ကြည့်လိုက်သည်။
အိပ်နေတဲ့ သူ့အမေ့ မျက်နာလေးက ကလေးတစ်ယောက်လို အပြစ်ကင်းသည်။ ရင်အုံကို ကြည့်လိုက်တော့ ထွားကြိုင်းလှတဲ့ သူ့အမေ့ရဲ့ ရင်သားအစုံကို မြင်ပြီး မင်းထက် တံတွေးမြိုချမိသည်။ ဒါတောင် ညက သူ့အမေနဲ့ သူ့အဖေ မလိုးဖြစ်လို့ ဘရာစီယာက ဝတ်ထားလို့ တော်သေးသည်။ ဘရာစီယာ ချွတ်ထားရင် ဒီထက် ပိုကြီးတယ်ဆိုတာ သူ့အမေရဲ့ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေပုံကို မြင်ဖူးတဲ့ မင်းထက် တစ်ယောက် တတ်အပ်ပြောနိုင်သည်။ ဒေါ်ရီဝေဦးမှာ ရင်သားကြီးသလောက် ကလေးမရသူပီပီ နို့သီးတွေက တွဲကျမနေပဲ တင်းရင်းလို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသည်။
မင်းထက်တစ်ယောက် သူ့အမေကိုကြည့်ရင်း တဏှာဆန်သော အတွေးတွေနဲ့ တောင်နေတဲ့ သူ့လီးကို ပွတ်နေမိသည်။ သူ့အမေက ဟမ်… ဆိုပြီး အကြောဆန့်ကာ အသံထွက်လာတော့မှ မင်းထက် အမြန်ထပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားသည်။ အခန်းပြင် ရောက်တော့
“သား.. သားရေ မေမေ့ကို ဆွဲထူပါဦး။”
မင်းထက်မှာ တောင်နေတဲ့လီးကို ဘယ်မှာ ဖွဲ့ထားလို့ ဖွဲထားရမှန်း မသိ
သူ့အမေ ခေါ်နေပြီးမို့ မထူးတော့ဘူး ကြံဖန်ရမှာပဲဆိုပြီး တောင်နေတဲ့လီးကို သူ့ပေါင်နဲ့ ညှပ်ထားက အခန်းထဲသို့ ဝင်လာလိုက်သည်။
“သား.. ဘာလို့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ထားတာလဲ ခွာလိုက်”
“ခွာမှာသာ ခွားစမ်းပါ…မေမေပါ သူစိမ်းမဟုတ်ဘူး”
သားဖြစ်သူ ခွာပစ်လိုက်တော့မှ လီးကြီးက ရန်သူကို ရုတ်တရက်တွေ့လို့ အမြန်သေနတ်ပြင်ပြီး ပစ်ဖို့ အဆင်သင့် ချိန်ထားတဲ့ စစ်သားတစ်ဦးရဲ့ သေနတ်ကဲ့သို့ပင်…။
“အိုး… သား… သား… မရိုးတော့ဘူးနော်။ အခုတလော သားလီက ခဏခဏ တောင်နေတယ်”
“မဟုတ်ပါဘူး မေမေ သားသေးအရမ်းပေါက်ချင်လို့ပါ။ ခဏနော် မေမေ သား သန့်စင်ခန်း သွားလိုက်ဦးမယ်”
အိမ်သာထဲရောက်မှ မင်းထက် သူ့လီးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး မေမေ မေမေလို့ တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ကာ ဂွေးကို အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ ထုပစ်လိုက်သည်။
“သား သေးပေါက်တာ ကြာလှချည်လား။”
“အီးပါ ပါနေလို့ မေမေရေ… အဲ့ဒါကြောင့်”
“သား… မေမေ့ကို ခေါ်သေးလားလို့”
“မဟုတ်ပါဘူး မေမေ သားမခေါ်ပါဘူး”
ဒေါ်ရီဝေဦးက နားအရမ်းပါးသည်။ သူအပျိုအရွယ်တုန်းက သူ့မိဘတွေ ခိုးလိုးတာတောင် အသံလေး တိုးတိုးမြည်တာနဲ့ သူသိသည်။
မင်းထက် သူ့ကို အိမ်သာထဲမှာ သွားပြီး မှန်းထုသလို သူကလည်း အခန်းထဲမှာ သူ့လက်ခလယ်ဖြင့် စောက်ပတ်ကိုနှိုက်ပြီး “သားရယ် သား… အား မေမေ့ စောက်ပတ်ကို လိုး.. လိုး..” ဆိုပြီး အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ သားကိုမှန်း၍ အာသာဖြေနေမိသည်။ အမှန်မှာ ဒေါ်ရီဝေဦးက မင်းထက် သူ့ကို လာထိုင်ကြည့်ကတည်းက နိုးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဟာကို ထ၍ ရနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း သားနဲ့ အသားချင်း ထိတွေ့နေရတာကို သာယာနေမိသည်။
ဒီနေ့ကတော့ တစ်နေကုန်အောင် သားအမိနှစ်ယောက် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ရင်ခုန်နေကြသည်။ ဒေါ်ရီဝေဦး တွေးနေမိသည်မှာ သားကြောင့် ရင်ခုန်ရသလိုမျိုး တစ်ခါမှ ရင်မခုန်ဖူးပါ။ သူ့အဖေနဲ့က မိဘတွေ သဘောတူပြီး ပေးစားခဲ့ကြတာ။ နှစ်ဖက်သော မိဘမျိုးရိုးတွေကလည်း သားသမီး များများ ထွန်းကားလေ့မရှိ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အများဆုံး နှစ်ဦး၊ အနည်းဆုံးတစ်ဦးသာ ရလေ့ရှိသည်။
ဦးထွန်းဝေကို သူအရမ်းလေးစားရတဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် လက်မထပ်ခင်ကတည်းက အရမ်းရင်းနီးပြီးသား။ သူကလေးလိုချင်တော့ စိတ်ကြိုက် လိုးချင်သလို အလိုးခံခဲ့ခြင်းသာ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာက လေးစားမှုပေါ်မှာ မူတည်နေပြီး တစ်ဦးဖြစ်ချင်တာကို တစ်ဦး ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသာ။
မင်းထက် နောက်နေ့ ကျောင်းသွားတော့ မျိုးလင်း ဆိုတဲ့ကောင်က ဆရာမဆူလို့ဆိုပြီး Mp4 မပြတော့။ မင်းထက် ကျောင်းမလာတဲ့နေ့က မိတာ။ မိတယ်ဆိုတာ ယောကျ်ားလေးထဲက တစ်ယောက်က သူများတွေ ဝိုင်းကြည့်တာကို သူကြည့်ချင်ပေမယ့် မမြင်ရတာနဲ့ မနာလိုဖြစ်ပြီး ဆရာမကို တိုင်လိုက်လို့ဖြစ်သည်။ အောကားတွေ အကုန် ဖျက်ပစ်လိုက်ရသည်။ အမှန်မှန်တော့ mp4 ဝယ်တဲ့အခါ ဆိုင်က ထည့်ပေးထားတဲ့ အပြာကားတွေ ပါလာခြင်းဖြစ်သည်။ အတန်းထဲမှာလည်း ဆရာမကြီးက
“အခုမှ ၉ တန်းပဲ ရှိသေးတာ နင်တို့တွေက ငယ်သေးတယ်။ အဲဒါတွေက နင်တို့ရဲ့ စိတ်ကို ဖျက်ဆီးမှာ မကြည့်မိစေနဲ့ ကြားကြလား။”
“မိန်းကလေးတွေ နင်တို့ ကိုယ့်ဘာသာနေကြ သိလား။ ယောကျ်ားလေးတွေကို ယောင်လို့တောင် မကြည့်မိစေနဲ့။ ကြည့်မိရင် နင်တို့က သူတို့ကို ကြိုက်နေတာလို့ထင်ပြီး ရည်းစားစကား ပြောဦးမယ်။ ကြားလား”
ပြောမည့်သာပြောတာ အတန်းထဲက ကောင်တွေက ကိုယ့်အတန်းထဲက ကောင်မလေးတွေကို မပိုးပန်းဖူးတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားပဲ ဖြစ်သည်။ ကြားထဲ အင်္ဂလိပ်ဆရာမတောင် မလွတ်။ မင်းထက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက ငပွေးတွေလို့တောင် ပြောရမည်။
မင်းထက်က ရိုးအေးတော့ အင်္ဂလိပ်ဆရာမက အရေးပေးသည်။ ထစ်ကနဲဆို
“ဆရာမ ဆွဲခြင်းကို သယ်ပေးနော်။”
ဆိုတော့ အတန်းထဲက အသက်အကြီးဆုံးကောင် ဖိုးရှုပ်က
‘မင်းထက်…. ညီ…. ဒီဆရာမက မင်းကိုတော်တော် သဘောကျတယ်။ အဲဆရာမကို လိုက်ပါလား။ ငါတို့က လိုက်တာ မရလို့”
“ကိုကြီးကလည်း ကိုယ့်ဆရာမကို ငရဲကြီးမှာပေါ့။”
“မကြီးပါဘူးကွား ဆရာမက ကြိုက်ရင် ငရဲမင်းတောင် ထွက်ပြေးဦးမယ်။”
“ကျွန်တော်က ကိုကြီးတို့လို မဟုတ်ဘူး။ ဆရာမကို တကယ်ကြိုက်ရင်တောင် လေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ ရည်းစားစကား မပြောဘူး။”
“မင်းထက်… နောက်ပိုင်းကျရင် မင်းလိုနေမည့်သူ မရှိတော့ဘူးကွ။ မင်းက တော်တော်ရိုးတာပဲ။”
မင်းထက်ပဲ ရိုးတာလား၊ စိတ်ပဲ မပါတာလား မသိ။ သူ့အမေကိုကျတော့ လီးရည်ထွက်အောင် မှန်းထုခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်သည်။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းချိန်လေး တစ်နေ့တာ ပြီးသွားပြန်သည်။
ညရောက်တော့ အိပ်ရာထဲမှာ မင်းထက် အိပ်လို့မရ။ ဒီအချိန် သူ့အဖေနဲ့အမေ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သိချင်မိသည်။ အရင်တုန်းကတော့ စိတ်မဝင်စား။ အခုမှ ဘာစိတ်ပေါက်နေမှန်း မသိ။ သူ့‌အဖေနဲ့အမေတို့ကို ချောင်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါ်လာတော့ သူတို့အခန်းဆီကို ခြေလှမ်းလိုက်သည်။
မင်းထက် နေတဲ့ အခန်းနဲ့ သူ့အဖေ၊အမေ နေတဲ့ အခန်းက ခွာပြီး လုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ အသံမကြားရ။ ပြီးတော့ သူ့အဖေနဲ့ အမေက စကားပြောရင် သူ့အခန်းအထိ မကြားရအောင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေး ပြောတတ်သည်။
မင်းထက် သူ့အဖေ၊အမေ အခန်းနား ကပ်ပြီး နားထောင်တော့ အသံလေး ကြားလိုက်ရသည်။
“ဖတ်ဖတ်… ဖတ်ဖတ်…. ပြွတ်… ဖြွတ်…”
“အား… မိန်းမ ကိုယ်ပြီးတော့မယ်”
“အင်း.. ယောကျ်ား ဝေလည်း ပြီးတော့မှာ အရှိန်လေး နဲနဲတင်လိုက်”
(အင်း… သား မေမေလည်း ပြီးတော့မှာ မြန်မြန်လိုးပေး)
“တစ်ရာရီ မိုင်… အဲ ကိုနော် ဒီမှာ စောက်ပတ် အိပ်ပျော်သွားတော့မယ်”
(တစ်နာရီ မိုင်… အဲ သားနော် မေမေ စောက်ပတ် မနေနိုင်တော့ဘူး)
“သိပြီ… ကို လေဘာ အကုန်တင်လိုက်မယ်”
(သိပြီး မေမေ သား စက်သေနတ်မွှေ့သလိုမျိုး လိုးပေးမယ်)
“ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်”
ဦးထွန်းဝေ အချက်သုံးဆယ်လောက် ဆင့်လိုးလိုက်ပြီး သူပြီးသွား‌တော့ ဒေါ်ရီဝေပါ ပြီးသွားသည်။ အပြင်မှာ ခိုးနားထောင်နေတဲ့ မင်းထက်လည်း သူ့အဖေနေရာမှာ သူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောထားပြီး သူ့အမေကို မှန်းထုကာ ပြီးသွားလေသည်။
ဦးထွန်းဝေနဲ့ ဒေါ်ရီဝေ ကိုယ်ချင်း နည်းနည်းခွာလိုက်ပြီး ပက်လက်အနေအထားနဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးကို ကြည့်ကာ
“ဝေရေ… ကိုတို့ ကြိုးစားသလောက်… အခုထိ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်။”
“ကိုကလည်း ဆရာဝန်ပြောသားပဲ ဝေတို့ အချိန်မရောက်သေးလို့ မရသေးတာ နေမှာပေါ့။ လောလောဆယ် သားလေး ရှိတာပဲလေ။ ဝေ့ အသက်က အခုမှ ၃၁ ပဲ ရှိသေးတာ။ ကလေးအများကြီး ရနိုင်ချေ ရှိပါသေးတယ်။”
“အင်းပါ ဝေရယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဝေ့ကို…. ကို သိပ်လိုးအားမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ပတ် နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ ကို ကြိုးစားပါ့မယ်။”
“ရပါတယ် ကိုရယ် ကိုအလုပ်ရှုပ်ပြီး ပင်ပန်းနေတဲ့ဟာကို ဝေနားလည်ပါတယ်။ အိပ်ကြရအောင်…”
ဒီလိုနဲ့ အချိန်က တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးခဲ့လေသည်။ တစ်နှစ်တာ အချိန်က ဒေါ်ရီဝေဦးနဲ့ ချစ်သား မောင်မင်းထက်တို့ အတွက်တော့ ကြာညောင်းလွန်းလှသည်။ နှလုံးသားထဲက အချစ်ကို သားအမိဆိုတဲ့ အဖြူရောင်တံတိုင်းက ကာစည်းထားလေတော့ အသားချင်း ထိတွေ့ခြင်းကလွဲ၍ ဒီထက်အဆင့် မတက်ရဲခဲ့ကြပါ။ ကြားထဲမှာတော့ အမေဖြစ်သူမှာ သားဖြစ်သူရဲ့ လီရည်တွေပေနေသော သူ့ဘရာစီယာများကို မလျှော်ရဲ့ မဖွတ်ရဲ့ အချစ်ကြီးစွာ တိတ်တဆိတ် သိမ်းထားမိသည်။
တခါတလေတော့ မင်းထက်က သူ့အမေရဲ့ ဘရာနဲ့ အာသာဖြေပြီး သုတ်ရည်တွေ ပေသွားရင် ပြန်ပြီး လျှော်ဖွတ်ပေးတတ်သည်။
“ဟဲ့… သား ဘာတွေ လျှော်နေတာလဲ။ အိုး… မေမေ့ ဘော်လီကို လျှော်နေတာပဲ။ ဘာလို့ လျှော်နေတာလဲ”
“သိပါဘူး မေမေရယ်။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်တော့ မေမေ့ဘော်လီ ပေနေတာမြင်လို့ လျှော်လိုက်တာ။”
“ဪ… ဟုတ်လား။ မေမေ့သားလေးက သိပ်လိမ္မာတာပဲ။”
မကြာမကြာ မင်းထက်မှာ သူ့အမေထမီ လျှော်ပေးလိုက်၊ သူ့အမေဘော်လီ လျှော်ပေးလိုက် လုပ်နေရသည်။ ဟုတ်လေသည် မင်းထက်မှာ မိခင်ရဲ့ ပင်တီဖြင့် အာသာဖြေရအောင် မိခင်ဖြစ်သူမှာ ပင်တီမဝတ်သဖြင့် စကပ်၊ ထမိန်နဲ့ဘရာစီယာတို့ဖြင့်သာ အာသာဖြေရသည်။ တစ်ယောက် ချစ်နေသည်ကို တစ်ယောက်က သိသော်လည်း ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ ဖုံးဖိနေမိကြသည်။ နီးရက်နဲ့ ဝေးကြရတဲ့ စောက်ပတ်နဲ့ လီးတို့မှာလည်း ခဏခဏ အချစ်ရည်တွေရွှမ်းလျှက်မြဲသာ……။
ငါ့သား ၉ တန်းအောင်ပြီးဟလို့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ မျက်နာကို ရင်ခွင်ထဲမှာ တင်းကြပ်စွာပိုက်ရင်း သားမြတ်အစုံမှာလည်း လှုပ်ရှားထကြွလျှက် မင်းထက်မှာ သူ့အမေ့ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကြား မျက်နှာကို ဖွတ်နေမိတယ်။ သူ့အမေလည်း ဒီအရသာကို ခုံမင်လျှက်…
“ဒီသားမိနှစ်ယောက် ဘာတွေ ဝမ်းသာနေကြတုန်း”
“သား ၉ တန်း အောင်တယ်လေ ကို”
“ဟားဟား… ဒါများ ဝမ်းသာရတယ်လို့”
“ကိုနော် ကိုယ့်သား စာမေးပွဲကျမှ ဝမ်းသာရမှာလား”
“ကို အဲဒီသဘောနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားက လိမ္မာလို့ အောင်ပြီးသား။ ကို ပြောချင်တာက ဒီထက် ဝမ်းသာစရာ ရှိသေးတယ်”
“ဘာလဲ ဖေဖေ။ သားကိုပြောပါဦး။”
“ငါတို့ နောက်အပတ်ကျရင် မြို့မှာ ပြောင်းနေရတော့မယ်။”
“ဟုတ်လား ကို။ ဝေဖြင့် ဝမ်းသာလိုက်တာ။ ဒါနဲ့ကို သားက ဆယ်တန်းတက်ရမှာ ကျောင်းက ဝေးလား။”
“ကိုသိလား ဝေတို့သားအမိက ဝေးနေကြရင် ရူးကြလိမ့်မယ်။ မိုးတွေးကြီး ဗွက်အိုင်တောထဲမှာတောင် ဝေက သားရှိတဲ့ ရွာသစ်ကို တစ်ပတ် နှစ်ခါ သုံးခါလောက် သွားသေးတာ။”
“ကိုတို့ မိသားစု အရင်လို မကွဲရတော့ဘူး။”
“ဟား…. ဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုရယ်။”
သားအမိ သားအဖ သုံးယောက် ခဏဖက်နေကြပြီး တတင်္ဂဂလေး တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ထိုတိတ်ဆိတ်မှုကို ဦးထွန်းဝေကပဲ ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။
“ကဲ… ဝမ်းသာအားရတဲ့ ကိုတို့ ထမင်းလက်ဆုံ စားကြရအောင်”
“အံမယ် ငါ့မိန်းမ ယဉ်ကျေးလာပါလား”
ဒီလိုနဲ့ ဝမ်းသာနေတဲ့ အရှိန်ကြောင့် တစ်ပတ်က မြန်လှသည်။ သူတို့ မြို့ကို ပြောင်းကြသည်။ အိမ်က တစ်ထပ် တိုက်ခံအိမ် အနည်းငယ်တော့ ဟောင်းနေပြီ။ လူမနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရောင်လေးတွေ ပြန်ရွှိုင်းလိုက်ရင်တော့ အသစ်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ အနှစ်နှစ်အလလ မိန်းမမီးဖွားဖို့ ပိုက်ဆံတွေ စုထားခဲ့ပေမဲ့ သားတစ်ယောက်တည်းရှိတော့ သိပ်အကုန်အကျမရှိခဲ့။ သားက ကျူရှင်တောင် တက်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့ ငွေတွေ ပိုစုမိသည်။ စုဆောင်းထားသော ငွေအချို့ကို ဘဏ်မှာ အပ်ထားပြီး အခုချိန်မှ အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ ဝယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးထွန်းဝေမှာ ကုန်သည်ပွဲစားမို့ အသိမိဆွေ ပေါများလှသည်။ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးရဲ့ စတည်တဲ့ ကုမ္မဏီမှာ ရှယ်ယာလည်း ဝယ်နိုင်ခဲ့သည်။ အိမ်ကလည်း အသိမိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်ဖြစ်လို့ ဈေးကြီးကြီး ပေးမဝယ်ရပါ။ ဈေးနှုန်းက သင့်တင့်သည်မို့ အဆင်ပြေခဲ့သည်။
ဦးထွန်းဝေမှာ အရင်က လယ်သမားကြီးတစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်သည်။ သူ့လက်ထက်မှာ လယ်တွေ အကုန်ရောင်းလိုက်ပြီး ကုန်သည်လုပ်သည်။ မိန်းမဖြစ်သူ ဒေါ်ရီဝေဦးတို့ ဘက်ကတော့ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားတွေ ဖြစ်ကြသည်။ မိဘတွေက အရမ်းရင်နှီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမို့ သူတို့နှစ်ဦးကို ပေးစားခဲ့ကြသည်။ မကြာမှီမှာပဲ သူတို့ မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့ကြသည်။ ကံကြမ္မာရဲ့ ဆန်းကြယ်ခြင်းသာ။
ဦးထွန်းဝေက ရှစ်တန်းကျ ဒါပေမယ့် ကုန်သည်ပွဲစား လုပ်နိုင်လောက်အောင် ဉာဏ်ပြေးလှသည်မို့ ဇနီးနဲ့သားမှာ သူများရှေ့ မျက်နှာမငယ်ရပေ။ ရှယ်ယာမှာ လေးဦးစပ်ပြီး ထိုလေးဦးထဲမှာ ဦးထွန်းဝေရဲ့ ရှယ်ယာက ပိုများသည်။ ဒါပေမယ့် တတ်ကျွမ်းသော မိတ်ဆွေ ရှယ်ယာရှင်ကိုပဲ အပ်ပြီး ပွဲစားအလုပ်ကို ဆက်လုပ်သည်။ မိသားစုတွေ ဝမ်းသာလို့ မဆုံးသေး…
“ဟဲလို… ဒါက ဦးထွန်းဝေ အိမ်ကလား။”
“ဦးထွန်းဝေ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့ ဆေးရုံ ရောက်နေပါတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျမ အခုပဲ လာခဲ့ပါ့မယ်။ ဘယ်ဆေးရုံမှာလဲ မသိဘူး… ဟုတ်ကဲ့… အခန်းနံပတ်ကရော… ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
“သား… သား ဖေဖေ ဆေးရုံ ရောက်နေတယ်။”
“ဦးထွန်းဝေက ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။”
“ဟုတ်ကဲ့… ကျေးဇူးပါ ဆရာဝန်ကြီးရယ်”
“ရှင်… ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ”
“ဦးထွန်းဝေမှာ ကလေး မရနိုင်တော့ဘူး”
“ရှင်… တကယ်လား ဆရာ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ… ကျွန်တော်တို့ စစ်ချက်အရ သူ့မှာ သေလောက်အောင် ဒဏ်ရာကြီးကြီး မပါဘူး။ ပြီးတော့ ခေါင်းလည်း ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ သူသတိမေ့သွားတာကတော့ အလုပ်ပင်ပန်းပြီး ရှော့ဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်အရဆိုရင် ဦးထွန်းဝေမှာ ကလေးမရနိုင်တဲ့ ရောဂါ တစ်နှစ်နီးပါးလောက် ရှိနေပါပြီ။”
“အဲဆိုရင် ဆရာ သူ့ကို ဒီအကြောင်း မပြောပြပါနဲ့နော်”
“သူနိုးလာရင် အိမ်ကို ခေါ်သွားလို့ ရပါပြီ။ သုံးရက်လောက်တော့ နားခိုင်းလိုက်ပါ။ သူအရမ်း ပင်ပန်းနေလို့”
“ဟီး…. အီး…. ဟီး….”
“သား ဘာဖြစ်တာလဲ… သားဖေဖေက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပင်ပန်းလို့ မူးလဲတာပါ။”
“ဖေဖေ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး သားရယ်။”
“သားက… ဖေဖေ တစ်ခုခု ဖြစ်မှာစိုးလို့ ငိုတာပါ။”
“အေးပါ… သား… ဖေဖေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး မငိုနဲ့တော့။”
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဦးထွန်းဝေကို သားအမိနှစ်ယောက်လုံး ပြုစုကြသည်။ တစ်ပတ်လောက် အနားယူခိုင်းပြီးနောက် ဦးထွန်းဝေ ကုမ္ပဏီကို စတင် အလုပ်ဝင်တော့သည်။ ကြားထဲ သူများအကူအညီတောင်းရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်ပေးသည်။ သူဌေးအနေနဲ့ ဝင်လုပ်ရသည်မို့ စီမံတတ်ရင် ကြီးကြီးမားမား နားလည်တတ်ဖို့ မလိုပါ။ ကုန်သည်ပွဲစားပီပီ အညာမမိပေ။
“မေမေ သားကို အကူအညီတစ်ခု တောင်းချင်လို့”
“သား… မေမေ့ကို ဗိုက်ကြီးအောင် ကူညီပေး”
အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ရီဝေဦးရဲ့ စကားကြောင့် မင်းထက် လီးထတောင်သွားသည်။
ဆိုပြီး မင်းထက် မိမိအင်္ကျီကိုချွတ်ပြီး သူ့အမေရဲ့ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လိုက်မိသည်။
“အဲ.. အဲလို မဟုတ်ဘူး သား။ သား ဂွေးထုလိုက်။ သုတ်ထွက်ခါနီးမှ မေမေ့ဟာထဲ ထည့်ပေး”
မင်းထက် အတွင်းခံကို ချွတ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို လှန်လိုက်သည်။ သူ့အမေက ထမိန်ပဲ ဝတ်တာဆိုတော့ အထွေအထူးမရှိ။
“ဝိုး… သား သား လီး”
အရင်ထက် နှစ်ဆနီးပါး ပိုတုတ်ပြီး အရှည်က ၅ လက်မခွဲ ကျော်နေသော သားလီးကို မြင်တော့ မိခင်ဖြစ်သူမှာ တံတွေးဂလုကနဲ မြိုချမိသည်။ အရသာတော်တောရှိမှာပဲ စောက်ပတ်ထဲ ထည့်လိုက်လို့ကတော့ ဒေါ်ရီဝေတွေးရင်း ထမီပေါ်ကနေ မိမိစောက်ဖုတ်ကို ပွတ်နေမိသည်။
“ဖတ်… ဖတ်… ဖတ်… ဖတ်…”
မင်းထက် သူအမေရှေ့မှာ ဒီတစ်ခါပဲ ဂွေးထုဖူးတာမို့ အရသာရှိလှသည်။
“အား အား… မေမေ သားပြီးတော့မယ်။ မေမေ့ရဲ့ ထမီ လှန်လိုက်တော့”
ဒေါ်ရီဝေဦးလည်း ရုတ်တရက် ထမီလှန်လိုက်သည်။ ထိုနောက် မင်းထက်က သူအမေ စောက်ပတ်ဝကို လီးနဲ့တေ့ပြီး သွင်းလိုက်တော့
“နာတာပေါ့ နင့်လီးက ဆင်လီးကျနေတာပဲ။ မေမေ့ အဖုတ်တော့ ကွဲတော့မှာပဲ။ သုတ်ရည်ပန်းလိုက်လေ”
“ဟား.. သေနာလေး မေမေ့ကို လိမ်တာပေါ့ ဟုတ်လား။”
“မဟုတ်ပါဘူး မေမေရယ်။ မေမေ့ စောက်ပကို လိုးချင်တာ ကြာလှပြီး”
“ဘယ်သူကရော မလိုးချင်ဘူးလို့ ပြောလို့လဲ”
“ဟား… မေမေကလည်း သားလို… အာ… ဟုတ်ဘူး…. မေမေက သားလို မဟုတ်ပါဘူး။”
“အား.. သား… နာတယ် မေမေ နာတယ်”
ဒေါ်ရီဝေဦး ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ မင်းထက် သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့…..
“သား… မလုပ်တော့ဘူးလား၊ မေမေ့ စောက်ပတ် နာပေမယ့် မကွဲပါဘူး။”
“ဟုတ် သား သိပါတယ်။ မနာအောင် လုပ်ပေးမလို့”
“မတတ်ဘူး ထင်လို့လား ဖေဖေ့ထက်တော်လို့ ဖေဖေ့သားဖြစ်တာ ကြည့်လိုက်”
ပြောရင်းဆိုရင် မင်းထက် မျက်နာကို သူ့အမေစောက်ဖုတ်မှာ ဖိကပ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ရင်း ပွတ်ဆွဲခါရမ်းလိုက်သည်း။
ပလပ်ပလပ် ပွတ်တိုက်သံတွေ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်ယူသံတွေက မြည်လို့။
“သား… ဒီလောက်စုပ်နေတာ မေမေ့သေး ထွက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
“သောက်ရဲတယ်။ ဒီစောက်ပတ်ကြောင့် သားဖြစ်လာတာ ဒီစောက်ပတ် အရည်ကို ရွံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ”
မင်းထက်မှာ မိမိလျှာကို ရှည်နိုင်သမျှ ရှည်အောင် ထုတ်ပြီး သူ့အမေ စောက်ပတ် အတွင်းသားကို ကလော်ထိုးလိုက်သည်။ သူ့အမေရဲ့ စောက်စိကိုလည်း ကြာမြင့်စွာ လျှာနဲ့ ထိုးမွှေပေးနေတော့ စောင့်ရည်တွေ ဗြန်းကနဲ့ သူ့အမေက ပန်းထုတ်လိုက်မိသည်။
“အား… သားမျက်လုံးတွေ ပေနေပြီး ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး”
“ဟုတ်လား သား။ မေမေ မျက်နာသုတ်ပုဝါ သွားယူပေးမယ်”
“ရတယ် မေမေ။ မေမေ့ စောက်မွေးတွေက မျက်နာသုတ်ပုဝါပဲ။”
ဆိုပြီး ပေနေတဲ့ မျက်လုံးကို သူ့အမေ့ စောက်မွေးတွေနဲ့ သုတ်ပွတ်လိုက်သည်။
“အဲ… မေမေ ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာ”
တကယ်ပဲ ဒေါ်ရီဝေဦးက မင်းထက်ရဲ့ အချစ်ဦးနဲ့ ရည်စားဦးပါပဲ။
“မောင်လည်း မေမေ့ရဲ့ အချစ်ဦးပါ။”
“ဟုတ်တယ်သား နောက်မှ မေမေ ပြောပြမယ်။ ခုတော့ မေမေ့စောက်ပတ်ကို လိုးပေးဦး”
မင်းထက် ဘာမှမပြောဘဲ လီးကို သူ့အမေ အဖုတ်ဝတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည်း။
“မေမေ့ အပေါက်ကြီး ကြပ်ကြပ်နဲ့ သိပ်ကောင်းလို့… သား… သားလည်း အရမ်းကောင်းတယ်”
“ကောင်းရင် အားရပါရ လိုး”
“ဖတ် ဖတ် ပွတ် ပွတ် ဗြွတ် ဖြွတ်… ဗလိ… ဗလာ့”
“အား… သား… မေမေ့သား… အချစ်တုံးလေး… လိုးစမ်းပါ… မေမေ ကောင်းနေပြီ…. မေမေ့အဖုတ် ကွဲရင် ကွဲပါစေ အားမနာနဲ့… အား ရွှီး…. ချစ်တယ် ချစ်သူ သားလေးရယ်”
ဒေါ်ရီဝေဦး တရဇတ်ကြီး ပြောနေတော့ မင်းထက်မှာ ဘာပြောရမှန်း မသိအောင်ပဲ ဖြစ်နေရသည်။
“မေမေ… သားလိုးတာ ကောင်းလား”
“သားလည်း အရမ်းကောင်းနေတယ် ချစ်သူမေမေ မယား”
“ထပ်တူထပ်မျှပါ ချစ်သူ သား လင်လေး”
“ဖြွတ် ဖြွတ်.. ဗြွတ်… ပြွတ်.. ပွတ် ဖတ် ဖတ်ဖတ်”
အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတဲ့ မေမေ့စောက်ပတ်ရယ် အဝင်အထွက် မြန်လှတဲ့ သားလီရယ်တို့က အခုမှနီးလို့ ပြေးဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ပမာပေါ့။
လီးဝင်လီးထွက်လို့ မြည်တဲ့ အသံတွေ၊ စောက်ဖုတ်နဲ့ လီးရဲ့ ဆီးခုံ ရိုက်ခတ်လို့ ထွက်လာတဲ့ အသံတွေဟာ ဗုံသံတွေ၊ ဆိုင်းသံတွေထက်ကို သားအမိနှစ်ယောက်အတွက် နားဝင်ချိုစေသည်။ မင်းထက်မှာ မိခင်ရဲ့ စောက်ပတ်ကို အားရအောင်း လိုးလိုးရင်း နှစ်ဦးသား အရှိန်ပိုပိုပြင်းသထက် ပြင်းလာကြသည်။
ခွေးတွေလိုးတဲ့အခါ ခွေးထီးက အရမ်းမြန်မြန် လိုးနေတာထက်ကို မင်းထက်က လိုးနေသည်။ ဒေါ်ရီဝေဦးမှာ ကော့ကော့ပေးပြီး တခါတခါ သူ့စောက်ပတ်ကို အားရစွာလှုပ်ကာ ကူလိုးပေးသည်။ ဒီလိုနဲ့သားအမိနှစ်ဦးလုံး ကာမအထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားကာ မင်းထက်လီးရည်များ သူ့အမေ သားအိမ်ထဲသို့ ဒလဟောနဲ့ ခုန်ဆင်းသွားတော့သည်။ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ သားအိမ်နံရံမှာ သားဖြစ်သူ၏ ပြင်းထန်သော သုတ်ရည် ပန်းထုတ်မှုကြောင့် ဖရန်း ဖရန်း ရိုက်ခတ်လေတော့သည်။
သားအမိနှစ်ယောက် သားဖြစ်သူရဲ့ အခန်းထဲမှာ လီးကြီးကို မထုတ်သေးပဲ ခဏပွေ့ဖက်ပြီး ငြိမ်ကျသွားသည်။ ခဏနေတော့ သားဖြစ်သူက မချွတ်ရသေးတဲ့ သူ့အမေအင်္ကျီကို ချွတ်ဖို့ လုပ်နေသည်။
“ဘာလို့လဲ မေမေရဲ့။ သားတကိုယ်လုံးတောင် မေမေ့ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်တော့မယ်။ ဒီပေါက်စီကြီး နှစ်လုံးကို မကြည့်ရဘူးလား။”
“သား… ချွတ်ရင် မေမေနောက်တခါ စောက်ပတ် ထပ်တောင်လိမ့်မယ်။”
“တောင်တောင်ပေါ့..။ ဟော.. သားလီး တောင်လာပြီ မေမေ့အလှည့်ပဲ။”
ဒီလိုနဲ့ ဒေါ်ရီဝေဦး ဘာမှမပြောတာနဲ့ မင်းထက်က သူ့အမေအင်္ကျီကို ချွတ်လေသည်။ ဘရာစီယာသာ ကျန်တော့သည်။ ဒေါ်ရီဝေဦးက ဘရာကို တင်းတင်း ဝတ်ထားသည်။ အဲဒါတောင် နို့သီးက ထွားနေတာ သိသာသေးသည်။
“ချွတ်တယ် မေမေရေ ချွတ်တယ်”
ပြောရင်းဆိုရင်း ချွတ်လို့ရသွားတော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ အပြင်ကို ခုန်ထွက်သလိုမျိုး သားဖြစ်သူရဲ့ မျက်နာကို ထိမတတ် ဖြစ်သွားသည်။
“အို့… လန့်လိုက်တာ မေမေရယ်။ မေမေ့ နို့ကြီးက အရင်ကထက် ပိုတောင် ထွားလာသလိုပဲ။”
“ဟာ… မေမေ ချော်လဲတုန်းက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်ဖူးခဲ့တာလေ။”
“အဲမှာ မေမေ့ကို ချစ်မိသွားတာ”
“ဒါဆိုရင်တော့ မေမေက သားကို စောပြီး ချစ်မိသွားတယ်။”
“သား အတွင်းခံကို ဝယ်လာတဲ့နေ့ ကတည်းက”
“ဟား… ချစ်သူရယ် မေမေရယ်။ သားတို့ လက်ထပ်ကြမယ်နော်”
ဒေါ်ရီဝေဦး နို့သီးက ကြီးသလောက် တွဲမကျတဲ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိလှသည်။ မင်းထက် သူ့အမေရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို အားရပါးရစို့ပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ အောက်ဆင်းသွားကာ မိမိကို မွေးခဲ့သော စောက်ပတ်ဝအထိ ရောက်သွားသည်။ သားအမိနှစ်ယောက် နောက်တစ်ကြိမ်မက ထပ်လိုးဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီနေ့ ဦးထွန်းဝေ ပြန်မလာခင် တစ်နာရီအလိုအထိ သားအမိနှစ်ယောက် နားလိုက်လိုးလိုက် လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သားအမိနှစ်ယောက်မှာ အလိုးမပျက်ခဲ့ပါ။
တစ်ရက် ဒေါ်ရီဝေဦး မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်စရာရှိတာ ချက်နေရင်း
“မိန်းမ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အစားမှားလို့လား။ ညတုန်းကရော ကိုတို့ထမင်းစားပြီး ဘာစားဖြစ်သေးလဲ”
“ကိုရယ် အမေးအမြန်းကလည်း ထူလိုက်တာ။ ဒီလိုဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတာ မြန်မာကား မကြည့်ဖူးဘူးလား”
“ဟား… ငါ့မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ရနေတာလား”
“ယုံတယ် မိန်းမ… ကိုပျော်လို့မဆုံး ဖြစ်နေတာ။ ငါ လူဖြစ်ပြီကွ”
အမေဖြစ်သူကို တစ်နေကုန်လိုးပြီး ညဘက် အားယူတဲ့ သားဖြစ်သူ မင်းထက်မှာ သူ့အဖေ အော်သံကြောင့် လန့်နိုးသွားသည်။
“အခုမှ လူဖြစ်တာလား ကို။ သားလေး ရှိနေတာ ၁၅ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီ။ အခုမှ လူဖြစ်တာလား”
“ဝမ်းသာလို့ပါ မိန်းမရယ်။ အခုမှ လူ ပိုဖြစ်လာတာလို့ ပြောတာ”
“ဪ… အရင်က လူမစစ်သေးဘူးပေါ့။ တိရစ္ဆာန် နည်းနည်းလောက် ပါတယ်ပေါ့။”
“ပြောချင်တာပြော မိန်းမရာ။ ကိုတော့ ဒီနေ့ အလုပ်မသွားတော့ဘူး။ မိန်းမနဲ့နေပြီး ပြုစုမယ်။ ဟားဟား… နောက်ထပ် ငါကလေးရပြီးကွ…”
“ဟာ… ဖေဖေက ကလေးရပြီလို့ ပြောနေပါလား။ ဒါဆို မေမေ့မှာ ကိုယ်ဝန် ရှိပြီးပေါ့။ ဒါဆို ငါငါ ငါအဖေဖြစ်သွားပြီပေါ့” လို့ တွေးရင်း မင်းထက် သူ့အမေ ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ကြားယောင်မိသွားသည်။
“သား… သားဖေဖေက ကလေးအရမ်းလိုချင်တာ။ ဒါပေမယ့် အခုသူ့မှာ ကလေးမရနိုင်တဲ့ ရောဂါရှိနေတယ်။ မေမေ့ကို ဗိုက်ကြီးအောင်လိုးပြီး ဖေဖေ့ကို ပြုံးအောင် လုပ်ပေးပါနော်။”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေရယ် သားကြိုးစားပါ့မယ်။ ညဘက်မှာ ဖေဖေက ကြိုးစားတော့ နေ့ဘက်မှာ သားကြိုးစားပေးမယ်။”
“သားကို မေမေ အရမ်းချစ်တယ်။ သားဂွေးထုတဲ့ ပထမဆုံနေ့က မေမေ့အပန်းရောင် ဘော်လီလေး သားလီးရည်နဲ့ စွန်းသွားတယ်။ မေမေသားကို စွဲလမ်းလို့ မလျှော်ရဲ့ဘူး။ ဒီတစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး။ သားမလျှော်ဖြစ်တဲ့ မေမေ့ဘရာတွေကို မေမေ မလျှော်ပဲ သိမ်းထားတယ်။”
“မေမေရယ် သားကို အဲလောက်စွဲလမ်းရလား။”
“သားက မေမေ့အချစ်ဦးပါ။ သားဖေဖေ့ကို အရမ်းအထင်ကြီး လေးစားခဲ့တာထက် မပိုခဲ့ဘူး။ သားဖေဖေက လူကောင်း။ သူ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ သားက မေမေ့ချစ်သူ ဆိုပေမယ့် သားမိန်းမ မဟုတ်ဘူးနော်။”
“ဒါဆို.. မိန်းမမဟုတ်ပဲ ဘာလို့ သားကို လိုးခွင့်ပေးတာလဲ”
“သားဖေဖေ ပြုံးရအောင်လို့ပါ။ မေမေနဲ့ သားကလွဲပြီး ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့။ အထူးသဖြင့် သားဖေဖေပေါ့။”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ။ သားဖေဖေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်။ ဖေဖေ မသိစေရပါဘူး။ သားဖေဖေ့ကို ပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။”
ဒီလိုနဲ့ ဦးထွန်းဝေမှာ နောက်ထပ် သားသမီး ၅ ယောက်ကို မင်းထက်အားဖြင့် ရခဲ့သည်။ မင်းထက်မှာ အဖေ့ကို ပြုံးစေခဲ့တဲ့ သားပေါ့။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 26,570
← ဒို့ရိုးရာ အရက်ဆိုင်
သနားလို့ ခွင့်ပြုမယ် လာအိပ် →